मेयर बालेन साह भन्दा झन् कडा बनेर निस्किइन् उपमेयर सुनिता डंगोल, छिर्के दाउमा रहेकाहरुको हुनेभयो निद हराम ! – Annapurna Post News
मेयर बालेन साह भन्दा झन् कडा बनेर निस्किइन् उपमेयर सुनिता डंगोल, छिर्के दाउमा रहेकाहरुको हुनेभयो निद हराम !
June 11, 2022 sujaLeaveaComment on मेयर बालेन साह भन्दा झन् कडा बनेर निस्किइन् उपमेयर सुनिता डंगोल, छिर्के दाउमा रहेकाहरुको हुनेभयो निद हराम !
काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकामा अहिले नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधीहरु अहोरात्र जनताको सेवामा खटिएका छन् । प्रमुख र उपप्रमुख नै युवा त्यसमाथि नयाँ नयाँ मिसन भिजनसहित कामहरु धमाधम गर्न थालेपछि महानगरमा चमत्कारिक निर्णयहरु कार्यान्यनमै आउन थालेका हुन् । निर्वाचित भएको महिनादिन नबित्दै सार्वजनिक शौचालय देखि कल सेन्टर हुदै इन्फ्रास्ट्रक्टर एम्बुलेन्सका निर्णयहरु कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् ।
यसैबीच, मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले प्रणालीलाई पछ्याउने र कानुनको पालनामा सजग भएपछि बेरुजुको मात्रा घट्ने बताएका छन्। ‘सानातिना कुरामा ख्याल नपुग्दा तथा यस्ता कुरालाई ध्यान नदिँदा कहिलेकाहीँ असल नियतले गरेका कामका विषयमा प्रश्न आउन सक्छन्,’ प्रमुख शाहले भने, ‘वित्तीय अनुशासनको पालना गरेर बेरुजु हुन नदिने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।’
आन्तरिक लेखा परीक्षण तथा बेरुजु समपरीक्षण एकाईले शुक्रबार वडा सचिव, लेखापाल र इञ्जिनियरहरुसँग गरेको अन्तरक्रियाका क्रममा बेरुजु नियन्त्रणको सुझाव दिएका हुन्। उपप्रमुख सुनिता डंगोलले हतारमा काम नगर्न सुझाव दिइन्। ‘भोलि बेरुजु देखिने गरी काम गर्नुहुँदैन। अहिले सम्पन्न गरेका कामसम्बन्धी भोलि फाइल पल्टाएर सुरुदेखि हेर्नु नपरोस्,’ उनले भनिन्। उपमेयरको बोल्ड बोली पछि सामाजिक सञ्जालमा मेयर बालेन साह भन्दा उपमेयर सुनिता डंगोल झन् कडा बनेर निस्किएको टिप्पणी भइरहेको छ ।
यस्तै वडासचिवहरु यम बसेल, शुशिल सुवेदी, रमेश घिमिरे, सुवोध खड्का, कमल गौतम, सुरेश साहु, जयदेव घिमिरे, श्याम पाण्डे, शिवराज सोती, देवी वस्ती, टंक बराल, मञ्जु आचार्य, चन्द्रगोपाल प्रधान, सुनिल राजभण्डारीसहित सहभागीले वडाबाट हुने प्राविधिक र प्रशासनिक कामको अन्तरसम्बन्ध मिलाउनु पर्नेमा जोड दिए। वडा सचिवलाई प्रत्यायोजन हुने अधिकार, योजनाको स्वीकृत गर्ने दायरालगायत व्यवहारिक कुराहरुमा उनीहरुले धारणा राखेका थिए। वडाबाट गरिने पूर्वाधारमा लगत इष्टिमेट, मुल्याङ्कन र भुक्तानी प्रक्रियाको सम्बन्धमा उनीहरुको जोड थियो। उनीहरुले घटना दर्ता समयमा हुन नसक्दा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा वेरुजु देखिएको औँल्याएका थिए।
वडा १६ का लेखा प्रमुख चिनीकाजी महर्जनले वडाको वित्तीय व्यवस्थापनमा आन्तरिक समन्वय प्रणाली बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। यस्तै इञ्जिनियर सुमन बादे श्रेष्ठले प्राविधिक र प्रशासनिक विषयलाई छुट्याएर आफ्ना आफ्नै क्षेत्रमा जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए।
महानगरले वडामा पूर्वाधार विकास र प्रशासनिक खर्च निकासा दिने गरेको छ। यसरी निकासा गरिएको रकम खर्च गर्दा देखिएका बेरुजु व्यवस्थापनका लागि वडाका कर्मचारीहरुसँग अन्तरक्रिया गरिएको हो। लेखा परीक्षण तथा समपरीक्षण एकाई प्रमुख गोपालप्रसाद पोरखेलले भने, ‘हामीले बेरुजु फर्स्यौटको २९ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गरिसकेका छौँ। प्रक्रियामा रहेको प्रगति ४५ प्रतिशत पुग्न लागेको छ। यो बर्षको अन्त्यसम्ममा ५० प्रतिशत पु¥याउने प्रयासमा छौँ।’
४ लाखको राइफल किनेर सलमानलाई मार्न तस्मिएका थिए यी सार्प सुटर, पक्राउ परेपछि खुल्दैछन् यस्ता अपत्यारिला रहस्यहरु
एमालेका वडाध्यक्षहरुले नटेरेपछि बालेन साहकै स्टाइलमा अघि बढे धरानका मेयर हर्क साम्पाङ्ग